सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिका एकीकृत समाजवादीलाई ! « Pokhara Pati
सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिका एकीकृत समाजवादीलाई !
पोखरा – निकै सकस र विवादका बिच सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच महानगरको नेतृत्व बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ । सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले महानगरको विषयमा सहमति जुटाएसँगैं ११ वटा उपमहानगरबारे छलफल जारी राखेका छन् ।
मंगलबार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले ६ वटा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदको भागवण्डा गरेका हुन् । जसमा कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरको नेतृत्व लिने, पोखरा एकीकृत समाजवादीले लिने र वीरगन्ज महानगरपालिका जनता समाजवादी पार्टीलाई दिईने भएको छ ।
त्यस्तै, उपमेयरतर्फ वीरगन्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर नेपाली कांग्रेसले लिएको छ भने ललितपुरको उपमेयर माओवादी केन्द्रले पाएको छ । काठमाडौंको उपमेयर एकीकृत समाजवादी र विराटनगरको उपमेयर जसपाले पाएको छ । दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर भागबन्डा गरेका हुन् ।
महँगीविरुद्ध नेकपा (बहुमत) ले घोषणा गर्‍यो जनसङ्घर्ष